मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आफ्नै सुरक्षा युनिट – Enayanepal.com
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको आफ्नै सुरक्षा युनिट
२०७७, २ पुष बिहीबार मा प्रकाशित
सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नै सुरक्षा युनिट बनाउने भएको छ । विश्वविद्यालयको दशौँ सभा (सिनेट)ले सुरक्षा युनिट सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरे संगै सुरक्षा यूनिट बनाउने कानूनी बाटो खुलेको हो । सिनेट बैठकमा विश्वविद्यालयले आफ्नै सुरक्षा युनिट गठन गर्ने लगायतका सात वटा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । मंगलबार सम्पन्न सिनेटको बारेमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्द बहादुर सिंहले विश्वविद्यालयको सम्पतीको सुरक्षा गर्नका लागि पूर्व सैनिक तथा प्रहरीबाट भर्ना लिने गरी आफ्नै सुरक्षा दस्ता गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यो सँगै विश्वविद्यालयले अब १० देखि २५ जनाको सुरक्षा यूनिट बनाउने छ । सुरक्षा यूनिटमा शैन्य तालिम प्राप्त र ५० वर्ष उमेर मुनीका जनशक्ति राखिने बताइएको छ । यस्तै सभाले विश्वविद्यालयमा उप–प्राध्यापकले ५० वर्षसम्म सेवा प्रवेश पाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । यस अघि विश्वविद्यालयमा सह–प्राध्यापक र प्राध्यापकले मात्रै ५० अवधिसम्म सेवा प्रवेश पाउने कानूनी प्रावधान थियो । त्यस्तै सभाले विश्वविद्यालयका सबै आंगिङ क्याम्पसहरुलाई बहुमुखी प्रर्णालीमा लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।
आंगिक क्याम्पसमा विविध विषयको पठन÷पाठन हुने भएका कारण आंगिक क्याम्पसको यस अघिको नाममा बहुमुखी शब्द थप गरिएको हो । यो निर्णय सँगै विश्वविद्यालयका सबै आंगिक क्याम्पसको नाम बहुमुखी शब्द राखिने छ । विश्वविद्यालयको दशै बैठक विश्वविद्यालयका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यता र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपति गिरीराजमणि पोखरेलको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो ।
चार संकाय थपिए
विश्वविद्यालयको दशौसभा (सिनेट)ले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने सहितका थप चार वटा संकाय थप गरेको छ । जसमा स्वास्थ्य विज्ञान शंकाय, कृषि तथा बन विज्ञान शंकाय, अनुसन्धान र विकास केन्द्र (शंकाय) र कर्णाली आदिवासी ज्ञान सिप तथा प्रविधि शिक्षालय (शंकाय) थप गरेको हो । यो सँगै अब विश्वविद्यालयमा ८ वटा संकायको पठन÷पाठन हुनेछ । हाल विश्वविद्यालयमा मानविकी तथा समाजिकशास्त्र, शिक्षा, व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि र इन्जिनियरिङ संकायको पठन÷पाठन हुँदै आएको छ । थप भएका चारवटै संकायले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठन गर्ने विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।
जस मध्ये स्वास्थ्य विज्ञान शंकायतर्फ नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि वीपीएच, वीएसी नर्सिङ र वीए नर्सिङ र कृषि तथा बन विज्ञान शंकायतर्फ वीएसी एजीको पठन÷पाठन गरिनेछ । पहिलो वर्ष स्नातक तहमा चार वर्षे कार्यक्रम अन्तरगत वीएसी एजी, वीपीएच, वीएसी नर्सिङ र वीए नर्सिङको पढाई हुने छ । तर शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालयले आगामी दुईभित्र स्नाकोत्तर तहमा एमवीवीएसको समेत सुरु गर्ने उपकुलपति सिंहले बताए ।
शंकाय थप भएसँगै विश्वविद्यालयले एकसय ७१ जना नयाँ दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । थपिएका विषयमा ९४ जना र यस अघि विभिन्न संकायमा ७७ जना गरी कुल एकसय ७१ जनाको नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको उपकुलपति सिंहले जानकारी दिए । यसअघि विश्वविद्यालयमा तीन सय १९ जना मात्रै दरबन्दी स्वीकृत थियो ।